Ciidamada Degaanka ee Shabeelada Hoose oo Baaq ka Soo Saaray Maamul u Sameynta Gobolkaasi | Salaan Media
Ciidamada Degaanka ee Shabeelada Hoose oo Baaq ka Soo Saaray Maamul u Sameynta Gobolkaasi
Ceel Wareegoow July 27,2013(SM)-Waxaa soo gaaray maalintii shalay ahayd Gobolka Wafdi ka socda Dowladda oo uu hogaaminayay wasiirka Arimha gudaha Cabdikarim Guuleed, ayna ka mid ahaayeen xubnaha wafdiga wasiirka Cadaalada Cabdullahi Abyan Nuur,wasiirka Difaaca Cabdixakiim Fiqi iyo taliyaasha ciidamada Dowladda.Wafdiga waxaa ay tageen Lambar 50, ilaa Ceel wareegow waxa ayna la kulmeeen Odayaasha iyo Waxgaradka deegaanadii ay booqdeen. Odayaashana waxa ay dhankooda u gudbiyeen dhibaatada jirta iyo dhibka ay maleeshiyada beesha degta Galgaduud ay ku hayaan dadka deegaanka, kadibna waxa ay ku noqdeen Magaalada Muqdisho.
Waxaan jecelnahay in aan Bulshada Soomaliyeed Guud ahaan u cadeyno in Wafdigii maanta yimid gobolka aysan soo bandhigin qorshe dhab ah oo lagu xalinayo dhibaatada, mana u muuqan kuwo ay ka goán tahay xalinta dhibaatada ay mooriyaanta beesha degta Galgaduud ku hayaan Shacabka Gobolkan oo aan loo eegin Habqabiil ee ku gubtay dhibaatada y maleeshiyada beeshani ku heysay 22 sano ee la soo dhaafay.
Dadka gobolkana wax weyn kama fileyn markii horaba, waxa ayna ku sifoobeen wixii aan ka fileynay oo ahaa in ay booqasho qawda maqashii waxna ha u qaban ah ay gobolka ku imaan doonaan si Cabdikarim Guuleed uu u helo wax uu ka sheego Baarlamaanka Maalinta Axada-waaba hadii uu hortagee.
Hadii aan nahay ciidamada deegaanka Sh.Hoose ma nihin kuwo xukun u dagaalamayo. Sidoo kale ma jirto Qabiil Soomaliyeed oo aan naceyb u qabno. Waxaan nahay Ciidamo Deegaanka ah oo qoriga u qaatay in ay sharaftooda difaacdaan, waana ku taagnaan doonaa wadadaas ilaa aan dulmiga ka dulqaadno dadkeena.
Waxa noo muuqata in Dowlad Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay Dowlad aan awood lahayn oo jeebka ugu jirta Kaabo-mooriyaanta Beesha Galgaduud degta ee shaatiyada badan, waxaa noo muuqata in Wasiirka arimaha gudaha uu si cad ula safan yahay Beeshiisa, dulmigana ku raacsan yahay, sidaas oo ay tahay waxaan Bulshada Soomaliyeed u cadeyneynaa in dariiqa kaliya ee lagu xalin karo dhibaatada ka jirta Gobolka uu yahay:
1.in Dhisitaanka Maamulada Gobolka Sh.Hoose loo daayo dadka Gobolka, Markaan leenahay dadka Gobolka waa dhamaan qabiilada Soomaliyeed ee dega Gobolka, ee ay Soomalida ku taqaano.
2.waa in wasiirka arimaha Gudaha uu joojiyaa kaabo mooriyaanta u dhashay Beeshiisa ee warqadaha uu u soo qorayo ee la leeyahay waxay madax ka yihiin gobolka, Kaaba Mooriyaantaasna waa in ay kala doortaan in ay si nabad ah dadka deegaanka kula noolaadaan ama ay Gobolka isaga huleelaan oo ay jagooyin ka raadsadaan Degmooyinka ay beeshooda degto ee Guriceel iyo Dhuuso Mareeb.Wasaarada waa in ay saxdaa qaabka qaldan ee uu u dhisan yahay maamulada gobolka oo dadkii deegaank ay marti ka yihiin sida:
Muumulka degmada Afgooye ee beesha Galadi laga siiyay hal xubin, beesha Galgaduud-na laga siiyay 1o xubin. Waa in ay saxdaa dhamaan maamulada gobolka heer degmo ilaa heer gobol, Qabiilada Jiido, Tunni, 12 Koofi, Jareer,Hintire, Shanta caleemood iyo Biimaal ee aan maamulka hadda jira waxba ku lahayn ay xaqooda siisaa.
3.Taliska ciidamada Dowladda waa in uu ka qaadan Gobolka dhamaan maleeshiyada beesha Gagaduud ee dereyska ciidanka Dowladda xiran ee dhibaatada ku haya dadka Gobolka. Ragan waa mooriyaan caan ah oo 22 kii sano ee la soo dhaafay dhibaato ka waday Gobolka, kuwaas oo maalin gudeheed jagooyin General iyo Coloneel lagu siiyay. Tusaale ahaan; liibaan Madaxweyne waa Colnel, Goobaale waa Jeneral iwm, mana aha kuwo u qalma in ay ciidan soomaliyeed matalaan waayo waa mooriyaan dhiigmiirato ah.
Hadii ay dowladda Xasan Sheekh sidaas ku jeceshahay waa in ay geysata hadba goobta kale ee ay dooneyso laakiin dhibkooda ay dadka gobolka ka dulqaada.
4.Wasaaradaha Difaaca iyo arimaha gudaha waa in ay joojiyaan siyaasadaha qaldan ee ay ciidamada Dowladda ku qoryaan ee ku dhisan nin jecleysi iy sadbursi, dadka gobolkana loo ogolaadaan in ay ka mid noqdaan ciidamda Booliiska iyo Militeriga.
Waxaan wada ognahay in Wasiirka arimaha gudaha uu diiday 100 nin oo dadka deegaanka oo booliis ahaan loo soo tababari lahaa si ay u sugaan amaanka degmada Marka,Tawabarka loo fidinayo 100 askari waxaa balan qaaday Rai’sul wasaaraha laakiin waxaa cagta ku dhuftay Cabdikarim Guuleed.
5.Waa in Mashaariicda ay dalalka ay dowladda saaxibada yihiin ay ka fuliyaan Soomaliya qeybteeda laga siiyaa Gobolka Shabellada Hoose. Gobolka waxaa ka taagay dhibaatooyin badan. Cisbitaalka magaalada Marka ma shaqeeyo, waxaana hortaagan Hayádda Cosov oo qalabkii Cisbitaalka u qaaday Guriceel, lacagtii loogu tala galay cisbitaalkana guryo ay uga dhistaan madaxdeeda magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Waa in mashaariicda ay ka fulineyso dowladda Turkiga Soomaliya iyo hayádaha kale qeybtooda laga siiyo dadka Shabellada Hoose.
Dowladda Xasan Sheekh waa in ay dhego laab u duleela ku dhegeysataa Qodobadaan si ficil ahna u filisaa waayo waa xalka kaliya ee keenaya in istaagaan dagaalada ka jira gobolkaas, wixii kale waa xal mudo gaaban oo aan sii daaimi doonin. Hadii dowladda Soomaliya aysan dhegeysan qodobadaas dagaalo badan oo dhiig waro buuxiya yaa ku daadan doona Gobolka Shabellada Hoose.
Eeda dagaaladaas iyo wixii ka dhashana waxaa qaadaya Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Imaamyada ama Kaaba mooriyaata Habargidir ee dagaalada Iclaamiyay.
Sharaf oo dhan waxa ay u sugnaantaya Ilahaay
Afhayeenka ciidamada deegaanka Shabellada Hoose.Ceel wareegow